Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ na Beljọm Radja Nainggolan Child Story Plus Ihe na-emeghi ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; "Ninja". Anyị Radja Nainggolan Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Anyị Radja Nainggolan Biography gụnyere nyocha nke akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara ọ bụ otu n'ime ndị egwuregwu kachasị mma na nke zuru oke na Europe mana ole na ole na-ele ndụ ndụ Radja Nainggolan nke na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka amalite.
Radja Nainggolan Childhood Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Radja Nainggolan mụrụ na 4th nke May 1988 na Antwerp, Belgium. A mụrụ ya nne ya nwụrụ anwụ, Lizi Bogaerts Nainggolan na nna, Marius Nainggolan. Ha kpọrọ ya Radja nke pụtara "Eze".
Onye Belgium amụrụ ejima. A zụlitere ya na ụmụnne ya ndị nwoke atọ na ejima nwanyị aha ya bụ Riana Nainggolan. N'okpuru ebe a bụ foto nwata ha.
Na Belgium, a zụlitere ya na agbụrụ Flemish mana ọ rapaara na Indonesian. Site na mgbọrọgwụ, ọ bụ onye Indoneshian sitere na Batak yana okpukperechi, onye otu ụka Batak Christian Protestant.
Radja ka zụlitere Roman Katọlik wee asụ Dutch, Bekee na Italiantali nke ọma, yana ịghọta French. Dịka nwatakịrị, Radja hụrụ mmekọrịta dị n'etiti ndị mụrụ ya. Nna ya ji nkwuwa okwu jee ije n'ezinụlọ, si na Belgium pụọ, laghachi na Indonesia.
Radja, ụmụnne ya na nne ya ga-anọrịrị onwe ha, n'enweghị ego ọbụla. Nwa obula nke bi na nkpa nke ndi nne na nna ga-ama nke oma ihe ngbu obi nke o nwere ike ime. Nke a nwere ihe ndị na-emetụta Radja. Mmetụta dị iche iche nwere mmetụta dị ukwuu na mmepe ya nke o diri n'oge ọ bụ nwata.
Radja na ejima ya, Riana natara agbamume site na nne ya iji gbaa bọọlụ na-eche na nke ọ bụla ma ọ bụ ha abụọ nwere ike ịga nke ọma. N'ikwu nke a, n'ịmara ikike ha na ebe ha si abịa, Lizi Nainggolan hụrụ football dị ka onye na-ajụ ụmụ ya ka ha si na ịda ogbenye.
Radja Nainggolan Childhood Akụkọ - Ọrụ na Nchịkọta:
Ọchịchọ Radja maka football malitere mgbe ọ dị afọ ise. Ya na nwanne ya nwanyị, ọ malitere igwu egwu na Tubantia Borgehout, obere klọb si n'obodo ya. Mgbe ọ dị afọ 10, ọ kwagara Germinal Beerschot, otu ìgwè na ụgbọ elu Belgium.
Nke ahụ bụ mgbe ọ ghọtara na football bụ n'ezie ọdịnihu maka ya na ejima ya mara mma. Iji nwee nkwado ma ghara imechu nne ya anya, Radja akwụsịghị ịmụ ihe. Ya na nwanne ya nwanyị ejima, Riana nọ n'isi klaasị ha.
Radja nọgidere na Germinal Beerschot ruo 2005 mgbe Alessandro Beltrami mara ya onye nyeere ya aka ịkwaga na Piacenza na Serie B nke Italiantali ka ọ nwee njedebe dị mma maka ọrụ ntorobịa ya. Mgbe ọ bụ nwata, ọ kwalitere ndị okenye. Na 2010, ọ kwagara Cagliari ebe ọ na-egwuri egwu maka oge atọ dị ka nhọrọ mbụ na-enweghị mgbagha.
Ọrụ ya na Rossoblu mere ka ya bụrụ onye a ma ama n'etiti ndị na-agbapụ ha, bụ ndị kpọrọ ya aha n'elu ndepụta 11 gụnyere ndị kasị mma na akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ Sardinia. Nke a mere ka Rom gaa maka ọrụ ya na 2014. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Claudia na Radja Nainggolan Love Akụkọ:
N'ezie, football bụ osisi ọlaedo maka Radja. Ebe ọ hụrụ ndo na na-eme ka obi ghara iru ya ala. Ma eleghị anya, osisi ọlaedo ọzọ nke wetara ndo na nkasi obi ọzọ na-ezute nwunye ya ọ hụrụ n'anya, bụ Claudia.
Claudia Nainggolan Lai nke esere n'okpuru bụ nwunye Radja Nainggolan. Ọ bụ onye dị mfe, gbadata n'ụwa ma nwee ọmarịcha nwanyị nke na-enweghị agụụ maka ndụ ya kwa ụbọchị.
Ọ na-akọwa etu o si zute Radga sị…“Ezutere m Radja na Cagliari ma ọ bụ ịhụnanya n'anya mbụ. Mgbe m mụtara mgbe ọnwa abụọ gasịrị na ọ bụ ndị na-agba ama, Achọrọ m ịhapụ. Amaara m na ndụ ndị ọgaranya na-agba ọsọ na-arụsi ọrụ ike, karịa, ha nwere ọtụtụ ndị nwere mmasị. N'oge ahụ, ana m arụ ọrụ na nnukwu ụlọ ahịa na-azụ ahịa oge niile, ntakịrị m ka na-atụ uche ya.
Dika olu ka o siri lee anya, achọpụtara m ihere ka ọ gwara m na ọ hụrụ m n'anya, na ihe ijuanya na anya izizi. Mgbe ọ gwara m na ọ ga-aga Rome, anaghị m ewere ya nke ọma. Na Rome, onye ọ bụla na-eyi uwe kwesịrị ekwesị, n'adịghị ka Cagliari. O were m oge tupu mụ emee ihe. Mgbe otu afọ gasịrị, amalitere m iso ndị snịịka gaa. Ndụ m nke mbụ biri, bụ́ ebe m nweere onwe m karị ime ihe ụfọdụ, ka na-agụ m agụụ. ”
Ma Claudia na Radja Nainggolan kpebiri ka ha kee eriri na 2011. N'okpuru ebe a bụ foto agbamakwụkwọ ha bụ nke mere n'ebe dị iche iche nke Cinecitta World, ogige ntụrụndụ nke Castel Romano, Italy.
Alụmdi na nwunye ha gọziri ozugbo site na mkpụrụ nke afọ. Aysha Nainggolan ada ha mụrụ na 30th nke Jenụwarị 2012.
Claudia hụrụ n'anya ịgbaso ịhụnanya ya, Radja Nainggolan, n'isi obodo maka ọhụụ ọhụụ ya na nwa ha dị obere ka ọ toro na foto dị n'okpuru.
Di na nwunye ahụ ahụla oge alụmdi na nwunye na-agafe agafe. N'oge na-adịbeghị anya, di na nwunye ahụ gabigara ọtụtụ esemokwu dị ka akọwara na soshal midia.
Ndị uweojii Italy na-ebo ebubo megide Radja Nainggolan maka mmejọ, egwu na ime ihe ike megide nwunye ya. Claudia. N'ụzọ dị mma, ha agbanweelarị esemokwu ha.
Radja Nainggolan Ndụ Ezinụlọ:
Malite na, Radja enwetawo ọbara Batak n'aka nna ya, Marianus Nainggolan nke si Indonesia. Ọ dị mkpa ikwu na Radja Nainggloan sitere na ezinụlọ dara ogbenye na-ekele nna ya, Marius bụ onye hapụrụ obodo ya, Indonesia na-enwe olileanya ime ka ọ buru ibu na Belgium naanị ịchọta ndụ ka na-esiri ya ike ịme na Belgium.
Nke a kpaliri Marianus Nainggolan ịlaghachi Indonesia iji gaa n'ihu ahịa ya. Taa, ịrụsi ọrụ ike ya akwụ ụgwọla, mgbe nwa ya nwoke na nwa ya nwanyị mere ya nnukwu bọọlụ, Marianus n'onwe ya ghọrọ onye ọchụnta ego na agwaetiti Bali.
Na Piacenza nakwa Radja ya na nna ya na adighi ka ndi ozo Deli Ali.
Oge weere na njedebe 2007 amechie 13 afọ. Anyị mechara hụ ọzọ. Papa si Bali gaa totali ka ọ hụ mụ na Riana ” kwuru, sị Radja bụ onye na-emebeghị mmehie nke nna ya n'obi ya.
Nne: Nne Radja bụ onye Belgium site na mbido. Tupu alụmdi na nwunye, a na-akpọ ya Lizi Bogaerts. Lizi lụrụ Marius ma gbanwee aha nna ya na Nainggolan.
N'ụzọ dị mwute, Lizi nwụrụ na 2010, obere afọ atọ mgbe di ya lọghachitere na ịgbahapụ ya. Mgbe ọ nwụsịrị, Radja na-egbu egbu nku abụọ buru ibu na azụ ya na ụbọchị ọmụmụ na ọnwụ ya. Dị ka a hụrụ n'okpuru. N'ezie, Radja nwere azụ ya kpamkpam nye nne ya.
Nwanna nwanyị: Riana Nainggolan bụ nwa ejima nke nwanne ya nwoke, Radja. Amụrụ ya otu ụbọchị karịa nwanne ya nwoke na Antwerp, na May 3, 1988.
Dị ka e kwuru na mbụ, ụbọchị ọmụmụ nke nwanne ya nwoke bụ 4th nke May, 1988. Nwanne ejima Radja, Riana Nainggolan, dịka nwanne ya nwoke na-egwuri egwu maka ụmụ nwanyị AS Roma dị ka n'oge ederede. Ọ na-ekwukwa akụkọ banyere nna ya gbahapụrụ ya, onye hapụrụ naanị ya ma ezinụlọ ya n'ọnọdụ ọjọọ dị ka nwatakịrị.
Tupu ịbịa Roma, Riana Nainggolan ka na-egwuri egwu n'egwuregwu bọọlụ ụmụ nwanyị nke Belgium, Kontich. O duru ndi otu ya aka asọmpi mba na Belgium.
Nwanna: Manuel Noboa nke dị n'okpuru ebe a bụ ọkara nwanne nke Radja Nainggolan. Ihe mbụ ịmara banyere ya bụ eziokwu na Naboa bụ Chelsea Fan.
Radja ọkara nwanne nwoke Manuel Noboa agwala ndị nta akụkọ otu ugboro; “Emeela m ka ọ daa ụda ma doo anya n'ọtụtụ oge na nwanne m nwoke Radja, kwesịrị ịga Chelsea. Njikọ Premier bụ ebe dị mma maka ọnọdụ obi ya. N'ụzọ dị mwute, ọ hụrụ Rome n'anya nke ukwuu. "
Eziokwu jadị Radja Nainggolan:
Radja Nainggolan, onye Belgium na mgbọrọgwụ Indonesian, bụ, n'enweghị obi abụọ, nwoke na-emepụta ihe. Ebe ọ bụ na ị bịarutere Rom na 2014, ọnụ ọgụgụ ya na-arị elu na-amụba kwa afọ. Ọ bụghị nanị na ọ na-apụta maka egwuregwu ya n'ọhịa kamakwa maka anya ya dị oke mma na ọtụtụ ọnyá na ahụ ya dum bụ nke na-abịa na ihe mgbu dị egwu.
Radja Nainggolan attdị Mgbakọ:
Na otutu nyochaa, o kwuputara na egbu egbu ya nwere ihe ha bu ma ha di iche nye ya, karia ndi raara nne ya.
Na-ele anya na ntutu isi ya, Ọ bụrụ na anyị emee redio elu nke Radja Nainggolan, anyị na-ahụ paradaịs jupụtara na egbugbu, ụfọdụ ekpuchiwo ndị ọhụrụ, dị ka nke dị n'olu ya nke na-agụ; “Mmalite” (Mmalite).
Ọzọkwa, ụbọchị ọnụọgụ ndị Rom ya na ha gbara egwuregwu mbụ ya na Piacenza ejirila nku nku ya dochie anya onye Belgium ahụ. Hụ okpuru;
Ihe a na-ahụ anya n'ihu ahụ bụ akara dị egwu n'olu ya. Nke a bụ nnukwu ọmarịcha rose.
E nwere ogologo agwọ nke na-agafe ọkụ ya na n'etiti egbu egbu ya na Bekee: Bie ndụ n’enweghị isi. Withouthụnanya na-enweghị dabere. Gee ntị n’achọghị agbachitere. Na-ekwu okwu n’enweghị iwe ”. N'elu agwọ ahụ nwere ihe ederede: “Otu ndu, otu ochicho” (Otu ndu, otuachicho).
Nainggolan nwere ogige anụ ọhịa na ogwe aka ekpe ya na Buddha e gosipụtara n'okpuru. N'elu ụlọ ahụ bụ ogige lotus. Ọ nwere aha nwa ya nwanyị mbụ “ALISA” na aka aka ekpe na ọtụtụ kpakpando. N'otu ogwe aka, aha nne ya na asụsụ Elvish.
N'isi mkpịsị aka ahụ, Radja nwere ụfọdụ, nke nwere nọmba 5 (Ma eleghị anya, MAY, ọnwa ọmụmụ ya) na nke ọzọ, nọmba 4, (Pụtara, a mụrụ ya na ụbọchị anọ nke Mee). O nwekwara ihe odide nke kwuru… "Tohụnanya iji merie" (M hụrụ n'anya na-emeri) n'aka ekpe ya. N'aka nri ya, e nwere nke na-ekwu…"Kpọọ asị" (asị m ida).
Radja nwere obere egbu egbu na ụkwụ ya. N'apata ụkwụ aka nri ya, ọ na-egbu egbu otu microphone nwere okpu na asịrị RN4. N'ihe dị n'okpuru ebe a bụ dragọn na-atụ egwu n'apata ụkwụ aka ekpe ya.
N'ime nwa ehi ahụ, o nwere aha 'ninja' nke nwere nọmba 4. Na shin ya nwere aha nwanne ya nwanyị ejima na Chinese na nkwonkwo ụkwụ ya, akara ngosi nke dollar na "Las Vegas".
N'akụkụ aka ekpe, e nwere obere obere ọkpọ (n'akụkụ ọnụ) na n'ihu, mma agha na otu anya.
Radja Nainggolan Ndụ Nke Onwe:
Radja Nainggolan nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Ike: Ọ bụ onye a pụrụ ịtụkwasị obi, onye nwere ndidi, onye bara uru, onye siri ike n'agbanyeghị ọdịdị oke ya.
Ajọ: O nwere ike ịbụ onye isi ike, nke na-enweghị ihe ọ bụla.
Ihe Radja nwere mmasị: Ihe ndị dị mma, inwe ntutu dị iche iche, ilekọta ugbo, egwu, ịhụnanya, uwe elu na-arụ ọrụ aka.
Ihe Radja achọghị: Mgbanwe na mberede, nsogbu mmekọrịta, nchebe nke ụdị ọ bụla na akwa akwa.
Na nchịkọta, Radja dị irè na nke ọma. Ọ bụ onye na-enwe mmasị ịgha mkpụrụ nke ọrụ ya. Ọ na-eche na ọ dị mkpa ịhụ ịhụnanya na ịma mma gbara ya gburugburu ma na-echebara aka ma na-enwe mmetụta kachasị mkpa niile. Nainggolan dị njikere ịtachi obi na ịgidesi ike na nhọrọ ya ruo mgbe o ruru afọ ojuju.
Radja Nainggolan Sịga Eziokwu:
O kwukwara okwu n'ezoghị ọnụ banyere ịṅụ sịga na-agbanyeghị na akụkọ ndị nkụzi Belgium bụ Roberto Martinez sụgharịrị na nso nso a n'ihi àgwà ya.
'Ihere anaghị eme m n'ihi na m na-a smokeụ sịga, ọ dịghịkwa mgbe m zoro àgwà a,' Nainggolan gwara ndị na-ede akụkọ n'èzí n'ogige ọzụzụ ndị Belgium. “Amaara m na m kwesịrị isetịpụ ezi ihe nlereanya, enwere m ụmụaka… Mana abụ m naanị ndị ọgba bọọlụ, a na m arụ ọrụ m. Onye ọ bụla ma na m na-a smokeụ sịga, enweghịkwa m ike izo ya, mana ihere anaghị eme m.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Radja Nainggolan Childhood akụkọ tinyere akwụkwọ akụkọ efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.